Jocob Zuma oo loo diiday in uu ka qeyb galo aaska Halgame Ahmed – Balcad.com Teyteyleey
Jocob Zuma oo loo diiday in uu ka qeyb galo aaska Halgame Ahmed
Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jocob Zuma ayaan ka qeyb galin aas qaran oo loo sameeyay Ahmed Kathrada oo kamid ahaa dadkii usoo halgamay sidii looga hortagi lahaa midib kala soocii ka jiray dalka Koonfur Afrika.
Qoyska uu ka baxay Halgame Ahmed Kathrada ayaa ka codsaday Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika in uusan kasoo qeyb galin aaska loo sameenayay , Madaxaweynaha ayaana la sheegay in uu codsigaasi tixgaliyay kana baaqsaday in uu ka qeyb galo aaska Ahmed Kathrada.
Ahmed Kathrada oo xubin ka ahaa Xisbiga talada dalka Koonfur Afrika haya ee ANC uuna hogaamiyo Madaxweyne Jocob Zuma ayaa sanadkii hore ugu baaqay Madaxweynaha in uu is casilo kadib markii Madaxweynaha kusoo baxeen fadeexado Musuq maasuq la xariira.
Halgame Ahmed Kathrada ayaa kamid ahaa dadkii usoo halgamayay sidii dalka Koonfur Afrika looga xureyn lahaa cadaankii midab kala sooca waday, waxa uuna xabsi ku jiray 26-sano isagoo la xirnaa Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela.
Ahmed oo xabsiga laga sii daayay sanadkii 1989-kii ayaa noqday lataliyaha madaxweynihii ugu horeeyey ee si dimuqraadi ah loogu doorto dalka Koonfur Afrika ee Nelson Mandela, waxa uuna xubin muhiim ah ka ahaa Xisbiga ANC.
Xaaska uu ka geeriyooday Ahmed Kathrada ayaa iyana ah haweeney mayal adag We’ve got the best benadryl prices you can find on the market nowadays. Purchase your benadryl at our store for 2.41 USD today! oo inta badan ka hadasha Siyaasada ahna qof aan la ganban dhaliisha ay u jeediso Madaxweynaha dalka Koofur Afrika Jocob Zuma,
Aaska loo sameeyay Ahmed Kathrada ayaa ka dhacay magaalada Johanesburg , waxaana kasoo qeyb galay dadweyne badan ay ku jiraan masuuliyiin ,Madax hore iyo dad kale oo asxaab la ahaa Halgamaagan geeriyooday.
Madaxweyne Trump oo saxiixay qaraar lagu ballaarinayo weerarada ka dhanka ah al-Shabaab